पोखराका मान्छे ब्रोइलर कुखुरा हो, सुख पाएर के गर्छन् ? फू गरे ढल्छन् ! – MySansar
तालिमकै क्रममा सामाजिक सर्वेक्षणको लागि हामी गाउँतिर छिरेका थियौँ। एक जना आमासँग भेट भयो। आमाले दुःख गरेर बनाएको सामुदायिक भवन, हाम्रो तालिमलाई उपलब्ध गराएको एउटा कुखुरा, बजारका मानिसहरू, विषादीको प्रयोग, गाउँको रमाइलो आदिको बारेमा यसरी कुरा गर्नुभयो।
हेर्नुस् यो साढे तीन मिनेटको छोटो भिडिओ ।